Music Guys တွေအတွက် Bass သံအရမ်းမိုက်တဲ့ Sony ရဲ့ Extra Bass Portable Speaker ~ The ICT.com.mm Blog
Music Guys တွေအတွက် Bass သံအရမ်းမိုက်တဲ့ Sony ရဲ့ Extra Bass Portable Speaker
ဒီ XB23 Portable Wireless Speaker လေးက ကျစ်လျစ်၊ ပေါ့ပါးပြီး သယ်ရလွယ်ကူလို့ ခရီးသွားရင်းသုံးမလား? Camping ပဲသုံးမလား? အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့သုံးသုံး၊ တစ်ယောက်တည်းပဲ အပန်းဖြေဖြေ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး အကြိုက်ဆုံး Music တွေဟာ ကိုယ့်အနားမှာ ရှိနေမှာပါ။
Buy here now » https://bit.ly/32SD7Jm
အိုင်စီတီမှာ ဈေးဝယ်ရင် အွန်လိုင်းငွေချေစနစ်မျိုးစုံနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့အပြင် ငွေသားနဲ့ပေးချေမယ့်သူတွေဆိုရင် 5% Off Discount တောင်ပြန်ပေးသွားဦးမှာပါ။
#AYAPay, #CBPay, #KBZPay, #OnePay, #WavePay တို့အပြင် #Visa, #MasterCard, #MPU, #UnionPay, #JCB card တွေနဲ့လည်း ဝယ်လို့ရတော့ အားလုံးအေးဆေးပဲ။
#ShopICT #Myanmar #Sony #Bluetooth #speaker
Newer မြန်ဆန်တဲ့ Connection ကိုပဲလိုချင်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု Ubiquiti
Older ကျပ် ၃၀,၀၀၀ ကျော် ကို သက်သာစေမယ့် AOC Gaming Monitor (24G2E)